Goobaha Khadka Tooska ah ee Armenia - Xeerarka Koodhadhka Khadka Tooska ah ee Khadka
(534 votes, celcelis ahaan, 5.00 out of 5)
Khamaarka internetka ee Armenia waa la oggol yahay oo si firfircoon ayuu u kobcayaa, maaddaama dhammaan noocyada khamaarka ee internetka ay sharci ahaan sharci yihiin sharciga khamaarka internetka ee Armenia. Wadankan waxaa ku yaal labada shirkadood ee internetka ka shaqeeya ee hoos yimaada shatiga gobolka, iyo kuwa shisheeyaha ah.
Maaddaama dad badan oo muwaadiniin ah ay ku hadlaan Ruushka, waxay awoodi karaan inay ku raaxeystaan ​​ciyaaraha khamaarka internetka ee goobaha khamaarka internetka ee bixiya adeegyada ay ku bixiyaan Ruushka. Si kastaba ha ahaatee, goobaha shisheeye ee luuqadaha kale ayaa sidoo kale caan ku ah ciyaartoyda Ermeniga ah. mobile Khamaaristu waa sidoo kale aad u caan ah Armenia, sida heerka lahaanshaha ee aaladaha mobile kala duwan si joogto ah u kordhaya. Waxaanu ku qornaa liistada internetka ee khamaarka ee guud ahaan waddanku aad ugu wanaagsan yahay horumarinta dhulka iyo khamaarka internetka.
Liiska ugu sareeya ee 10 Armenian Online Casino
Taariikhda warshadaha khamaarka ee Ermeniya waxay dib ugu noqdaan qarnigii XYX. 1936 Ergaygu wuxuu noqday Jamhuuriyadda Soofiyeeti. Noocyada sharci ee kaliya ee khamaarka ee dalkaas wakhtigaasi waxay ku qeylinayeen tartanka iyo Lootarka Gobolka. Xaqiiqdii, Ermena ayaa ku sii socota warshad khamaarka ka dib burburkii Midowga Soofiyeedka. Hoolka khamaarka ee ugu horreeya ee dalka ayaa laga furay 1990, iyo casino ugu horeeyay waxay ka muuqatay 1991.
Meelo badan oo ka mid ah xarumaha khamaarka ayaa maanta ka hawlgala Armenia, oo ay ka mid yihiin hoolka bingo, casinos, jimicsi, iwm. Dhamaantood waxay ku shaqeeyaan saldhigyo ay bixiso Wasaaradda Maaliyadda ee Jamhuuriyadda Armenia. Mid ka mid ah shirkadaha ugu khamaarka badan waa Vivaro Betting, oo lagu aasaasay 2008. Ka mid ah kuwa kale ee suuqyada ah waa Totto Gaming, Goodwin-Bet iyo Yntanekan Loto. Xitaa inkastoo ay adag tahay in shirkadaha khamaarka si xawli ah, 2014 baarlamaanka Ergada ayaa ansixiyay sharci ah in la isku raacay in khadka casriga ah ee dalka ku yaala uu noqon doono goobo dalxiis, sida Jermuk, Tsakhkadzor, Sevan, iwm.
Armenia Online Casinos iyo Khamriga
Armenia waa wadan asal ah oo qadiim ah lehna midab lama ilaawaan ah iyo dabeecad soo jiidasho leh. Waxay isku daraysaa dabeecad taxaddar leh xididdada taariikhiga ah iyo casriga iyo teknoolojiyada cusub. Dabcan, inaad ku nasato Armenia, waxaa haboon inaad dhadhamiso cognac-ka adduunka ugu fiican iyo inaad waqti ku qaadatid casinos-yada xiisaha leh. CasinoToplists waxay go'aansadeen inay ogaadaan sida dhabta wax u yihiin khamaarka Armenia casriga ah ee khadka tooska ah iyo casinos-ka dhulka.
Casinos Online waa sharci ahaan shati ka haysta shirkadaha ruqsadaha leh ee Armenia;
Ajaanibta ka shaqeysa qadka tooska ah ee aan ruqsad haysan waqtigan lama mamnuuco. Waad ciyaari kartaa;
Waqtigan xaadirka ah, biilka ku saabsan xoojinta helitaanka hawlwadeenada shisheeye ayaa laga wada hadlay;
Haddii aad tahay qof bilaw u ah, waayo waxaad tahay qawaaniin kooban oo ku saabsan sida loo bilaabo ciyaarta internetka;
Taariikhda iyo goobta Armenia;
The casinos ugu caansan dhulka: "Senator", "Shangri La";
Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Armenia iyo Ermeniya;
Armenia waa wadan asal ah oo qadiim ah lehna midab lama ilaawaan ah iyo dabeecad soo jiidasho leh. Waxay isku daraysaa dabeecad taxaddar leh xididdada taariikhiga ah iyo casriga iyo teknoolojiyada cusub. Dabcan, inaad ku nasato Armenia, waxaa haboon inaad dhadhamiso cognac-ka adduunka ugu fiican iyo inaad waqti ku qaadatid casinos-yada xiisaha leh. CasinoToplists waxay go'aansadeen inay ogaadaan sida dhabta wax u yihiin khamaarka Armenia casriga ah, labadaba dhulka iyo casinos-ka internetka.
Shuruucda Armenia ee khamaarka - sooyaal taariikheed
1921 - 1928 Armenia waxay ka mid tahay ZFSFR ka dibna USSR. Ganacsiga khamaarka ee waddanka waa la oggol yahay. Laga soo bilaabo 1928, mamnuucida dhammaan dhulka USSR.
1936 Armenia ee USSR iyada oo ah jamhuuriyad midow. Tartanka orodka ee Yerevan iyo bakhtiyaanasiibka waa la oggol yahay.
1991 Sharciga ruqsadda: Go'aanka Golaha Wasiirrada Jamhuuriyadda Armenia No. 161. Furitaanka qamaarkii 1-aad ee Yerevan. Ruqsadaha waxaa bixiya Wasaaradda Maaliyadda.
1992 Sharciga canshuurta dakhliga -70% dakhliga khidmada casriga ah ayaa siinaya gobolka.
1998 Sharciga "On Fixed Payments" - in laga abaabulo khamaarka waddanka ayaa noqonaya mid fudud oo faa'iido badan leh.
2000 Madaxweynaha Robert Kocharian wuxuu saxiixay Sharciga lambar 102 "On Winning Games and Gaming Houses" - warshadaha khamaarka ayaa horumaraya oo sii ballaaraya. Ruqsadda furitaanka guriga ciyaarta ama hoolka ciyaarta. Waad ciyaari kartaa laga bilaabo 21 sano.
2001 Sharciga "Bixinta shatiga" - helitaanka shatiga wuxuu ku saleysan yahay nidaam adag, khamaarka waa la dhimay.
2004 Sharciga "Ciyaaraha guusha iyo guryaha khamaarka." Soo celinta go'an ee mashiinka booska waa 86%. Fogaanta khamaarka caasimada Yerevan waa ugu yaraan 50 km.
2016 - 2017 Wax ka beddelka sharciga waajibaadka. Kordhinta qiimaha liisanka loogu talagalay dadka sameeya buugaagta internetka waa 5 jeer (waxay ahayd $ 207,000, waxay ahayd $ 1 milyan). Ku xigeenka. Wasiirka Maaliyadda ee Armenia Pavel Safaryan ayaa soo bandhigay sharci qabyo ah oo ku saabsan shatiyeynta howlaha khamaariistayaasha qamaarka khadka tooska ah ka wada qamaarka internetka. Waqtigan xaadirka ah sharciga ayaa la tixgelinayaa.
Haddii aad ku ciyaareyso khamaarka khadka tooska ah ee Armenia, oo leh shati rasmi ah oo waddankan ah - waxqabadkaagu gabi ahaanba waa sharci.
Waad ku ciyaari kartaa boggaga shirkadaha ka shaqeeya ajaanibta, maadaama tan hadda aan la mamnuucin oo aan si dhab ah loola socon. Sidaa darteed, waxaad dooran kartaa khamaar kasta oo leh rukhsad rasmi ah oo caalami ah.
Haddii sharciga sharciga ku saabsan shatiyadaha ajnabigaa wali la hirgeliyo, waxay u badan tahay in la helayo casiino caalami ah iyada oo aan la xirin liisanka u dhigma.
Dhammaan wadaxaajoodyada ku saabsan ruqsadaha casiinyada ajanabiga ah lama caddeeyo, laakiin inkasta oo Ermeni kasta ay si ammaan ah ugu raaxeeysan karaan ciyaaraha casinos ee ay jecelyihiin oo ayna ka cabsaneynin in la xiro oo la xiro oo uusan awoodi doonin inuu helo guulahiisa.
Sida loo bilaabo cayaaraha ciyaaraha online-ka ah ee Armenia?
Dooro cas cas . Qiyaasta ugu weyn waa kalsoonida, shatiga iyo dib u eegista wanaagsan. Waxaan kugula talineynaa casino, oo ka gudbay imtixaanka - si tan loo sameeyo, fiiro gaar ah u yeelo tiirka midigta.
Waxaan si taxadar leh u bartaa casino . Haddii aad go'aansato inaad lacag ku ciyaarto, waa inaad marka hore wax ka ogaataa xuquuqdaada iyo xeerarkaaga. Dhammaan macluumaadka waxay ku jiraan boggaga internetka ee casino ee ku yaal qaybta dadweynaha. Fiiro gaar ah u yeelo qodobbada soo socda:
Helitaanka liisan, cinwaanno iyo xiriiro khadka casriga ah (telefoonka, sheekaysiga);
Faallooyinka ciyaartoyda ee shabakadda (waa inay ahaadaan kuwo togan iyo kuwo taban, haddii kale waxay u badan tahay inay tahay PR, ama waxa loogu yeero "madow" PR;
Shuruudaha gunooyinka iyo mushaharka. Waa maxay sharadka, waxaad ka heli kartaa halkan.
Su aasha lacagta . Casin kasta oo ajnabi ah wuxuu bixiyaa dhowr ikhtiyaar oo loogu talagalay gelitaanka iyo ka noqoshada lacagaha. Feejignow lacagta ciyaarta lagu ciyaari karo. Iyo sidoo kale fiiro gaar ah shuruudaha iyo shuruudaha ka bixitaanka guusha (qaar ka mid ah casinos-yada qaar ee guuleysta weyn ayaa lacagaha ku wareejiya qaybo).
Doorashada shakhsi ahaaneed :
Naqshadaynta Casriyeynta iyo Nidaamka Diyaarsan
Joogitaanka ciyaaraha xiisaha leh;
Ma u baahanahay inaan soo dejiyo barnaamijka iyo maxay yihiin astaamaha farsamada ee kombiyuutarka?
Miyuu suurtagal u yahay in uu u ciyaaro bilaash marka la eego habka tijaabada?
Nidaamka daacadnimada ee macaamilka - gunooyin, lacag celin iyo wixii la mid ah.
Waxaan kugula talineynaa inaad marka hore ku ciyaarto qaabka imtixaanka oo aad si taxaddar leh u akhrido sharciyada ciyaarta. Tani waxay si gaar ah run ugu tahay ciyaaraha kaararka (baccarara, blackjack, iwm).
Waxaan ku xusuusinaynaa inaad masaafo dheer khamaarka had iyo jeer ku sii jirto guusha, laakiin marwalba waxaad fursad u leedahay inaad ku qaadato wakhti xiiso leh, laga yaabee, inaad nasiib yeelan doonto. Si aad si fiican u xakameyso bankroll-kaaga oo aad u dheereyso xiisaha ciyaarta, aqri qaybtayada nidaamka iyo istaraatiijiyadaha ciyaarta
Casinos ugu caansan ee Armenia
Armenia, waxaa ku yaal casinos casri ah oo martida siiya dhammaan shuruudaha ciyaarta raaxada leh iyo xitaa inbadan. Isbeddelada ugu dambeeyay ee sharciga ma beddelin xaaladdan.
Guryaha ugu khamaarka badani waxay ka shaqeeyaan meel ka baxsan magaalada Yerevan, waxay ku taallaa wadada taasoo keenta garoonka diyaaradaha ee Zvartnots.
Casino "Senator" waa goob madadaalo oo ay ku yaalliin casino, makhaayad, naadi iyo bar lagu nasto. Barnaamijka bandhig asalka ah ayaa loogu talagalay martida. Sabti kasta waxaa dhaca isu soo baxyo. In "Senator" waxaad ku ciyaari kartaa roulette, blackjack, dhowr nooc oo turub iyo mashiinno naadi.
Shangri La Casino waxay u jirtaa 2 km oo kaliya xadka magaalooyinka waaweyn. Hay'addu waxay haysaa baarka ugu ixtiraamka badan, iyada oo adeeg u fidisa heerarka heerarka caalamiga ah: daraasiin miisas ciyaaro ah, hoolalka VIP, boqolaal boosas casri ah, seddex baarar, maqaaxi leh cunnada Armenia iyo qaaradda. Dhacdooyinka joogtada ah iyo kaftanka ayaa daruuri ah in la qabto.
Waxaa sii kordheysa, hay'adaha ayaa beddelaya dhammaan walwalka ciyaartoyda. Waqti aan sidaa usii fogeyn ayay bilaabeen inay u muuqdaan socdaallo junket ah. Martida khamaarka waxaa lagu bixiyaa qaddar cayiman oo dhigaalka ah oo keliya wareejinta, hoyga iyo tiro cayiman oo jajab ah, laakiin sidoo kale barnaamij dalxiis oo hodan ah.
Goobta Ereyga iyo taariikhda gaaban taariikhda
Jamhuuriyadda Armenia waa dawlad yar oo qadarin ah, dhulkuna wuxuu ku saabsan yahay 30 kun kiilomitir oo isku wareeg ah, dadkuna wax yar ayay ka badan yihiin 3 million. Laakiin taajirnimadu waa taariikhda geeska adduunka!
Armenia waxay ku taal Bariga dhow, Transcaucasia. Dariska ugu dhow ee wadanka waa Georgia, Azerbaijan, Turkey, Iran, Nagorno-Karabakh. Caasimaddu waa Yerevan, afka dawladdu waa Armeniya, laakiin ku dhowaad qof kastaa wuxuu si fiican ugu hadlaa luqadda Ruushka.
Goobta ay ku taal Armenia waa mid si aan caadi ahayn u guuleysatay, raadadkii ugu horreeyay ee degitaanku waxay dib ugu noqdeen xilligii 1.9 milyan sano ka hor. Great Armenia waxay joogtay khariidada Herodotus. Qarniyo badan, dhulku wuxuu ka mid ahaa dowlado iyo boqortooyooyin kala duwan, laakiin xuduudihiisa casriga ah ee dalku helay kaliya qarnigii labaatanaad. 1991 Armenia waxay noqotay dowlad madax bannaan - jamhuuriyad madaxweyne.
Armenia ee khariidada Aasiya
Matenadaran . Cinwaanka: 53 Mashtots Avenue, Yerevan 0009, Armenia.
Park of lovers . Cinwaanka: 21 Marshal Baghramyan Ave, Yerevan 0019, Armenia.
Masaajidka buluuga . Cinwaanka: 12 Mesrop Mashtots Ave, Yerevan 0015, Armenia.
Matxafka taariikhda Qaranka ee Armenia . Cinwaanka: 4 Republic Square, Yerevan, Armenia.
Park Victory . Cinwaanka: Azatutyan Ave, Yerevan, Armenia.
Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Armenia iyo Ermeniya
Ermena waa wadanka koowaad ee adduunka oo dhan si loo aqbalo kiristaanka oo ah diin dawladeed.
Afka Armenia wuxuu ka tirsan yahay koox luqado gaar ah - Paleobalkan. Luqadda kaliya ee nool, ee laxiriira waa Giriigga.
Xarfaha Armeniyaanka ayaa ka soo muuqday alifbeetada Cyrillic ka hor. 406 waxaa abuuray Mesrop Mashtots, waxaana loo tixgeliyaa mid ka mid ah kuwa ugu fiican adduunka (oo ay weheliso Kuuriya iyo Joorjiyaanka).
Mount Ararat waa calaamad u ah Ermeniya, laakiin tan iyo 1921 waxay ku taalaa dhulka Turkiga.
Tufaaxa Ereyga waa magac caam ah oo loogu talagalay abrikotka Yurub.
Armenia waa halka uu ku dhashay jeneraalo waaweyn. In kabadan 80 hogaamiye kooxeedyadii Byzantium waxay ahaayeen Armenia. Iyo hal tuulo oo yar ayaa siisay USSR 2 janaraal iyo 11 geesiyadii Midowgii Soofiyeeti.
Casino of Armenia, waa shirkadaha ugu khamaarka ee ugu fiican ee Armenia
Mid kasta oo ka mid ah waddamada ayaa ku wanaagsan qaabkiisa, mid kasta oo ka mid ahna waxaa ka jira wax la arko iyo waxa loo bogay. Iyo Armenia maaha mid ka reeban arrintan. Mar alla jamhuuriyaddan, mid kasta oo dalxiisayaasha ka mid ahi waxay heli doonaan shaqo iyaga u gaar ah: qof ayaa awood u yeelan doona inuu ka fiirsado himilooyinkiisa, qofna wuxuu doorbidaa dalxiisyada xilliyada firaaqada ee goobaha madadaalada, tusaale ahaan, khamaar.
Guud ahaan, waxaa jira 8 casin ah oo ku yaal Armenia. Kuwani waa xarumaha khamaarka Flamingo, Fircoon, Shangri La, Senator iyo kuwa kale. Mid kasta oo ka mid ah xarumahan khamaarka, ciyaartoyda waxaa la siiyaa noocyo badan oo ka mid ah ciyaaraha khamaarka iyo adeeg tayo sare leh.
Tusaale ahaan, casino << Shangri La Yerevan >> waa mid ka mid ah xarumaha khamaarka ugu casrisan jamhuuriyadda. Albaabka laga galo khamaarkan waa $ 100 (kaar waxaa la siiyaa oo keliya dadka ka weyn 21 sano jir), laakiin lacagtani kuma koobna oo keliya kharashka tigidhka soo galitaanka: waxaa loogu beddelaa jajab, ka dibna waa la ciyaari karaa. Kasiinada waxaa ku jira dhowr hoolal oo lagu ciyaaro, makhaayad aad u fiican << Michelangelo Launch >>, oo ah naadi CW oo loogu talagalay ciyaartoyda VIP. Kasiinada waxay si joogto ah u martigelisaa bakhtiyaa-nasiibka iyo tartamada kala duwan oo ay ku guuleystaan ​​lacag caddaan ah, nidaam kaararka naadiyada oo xaq u siiya adeeg dheeri ah (jikada bilaashka ah, gelitaan bilaash ah, iwm)
Dhismaha casino wuxuu ku yaalaa 10 km ee wadada weyn ee Yerevan-Sevan, taas oo loogu yeeri karo mid ka mid ah meelaha ugu quruxda badan Armenia. Qeybta dhismaha madadaalada ee Shangri La waxaa ku yaal meel gawaarida la dhigto, oo loogu talagalay 100 baabuur. Sidaa darteed, ka walwalsho meesha looga tagayo ciyaartoyda gaadiidka ee aan ku qasbaneyn. Waxaad ku imaan kartaa khamaarka taksi.
Haddii aad rabto, waad adeegsan kartaa adeegyada hay'adda oo waxaad dalban kartaa safar-ciyaar. Waxaa ku jira safarka bilaashka ah ee loo yaqaan 'casino' (oo ay ku jiraan duulimaadyada ka socda waddamada kale ee leh fiisada), qolka hudheelka bilaashka ah, adeegga VIP, 10% luminta celinta maalin kasta iyo waxyaabo kale oo badan.
Casinos kale ee Armenia
Dalxiis ku ciyaarista khamaarka Armenia waxaa sidoo kale bixiya aasaasidda khamaarka "Sun Palace" , oo ku yaal Yerevan. Kaniisadan waxaad ku raaxeysan kartaa khamaarka sida roulette, Black jack, lafaha, baccarat, Caribbean iyo poker turub, fiidiyowga fiidiyowga, waxaa jira in ka badan 100 mashiinno naadi, iwm. Taageerayaasha ciyaarta ee heerarka ballaaran, qolka VIP ayaa shaqeeya .
Dhammaan wixii ku guuleysta khamaarkaan waxaa ku bixiya maamulka hay'adda lacagta uu ciyaartoygu doorto (euro, rubles) .Waxaa la socon karaa galbi ammaan.
Marka lagu daro khamaarista, safarka waxaa ku jira safar indho-indheyn ah oo ku yaala Yerevan iyo dalxiis Lake Lake.
Laakiin casino "Senator" wuxuu ku yaal xadka Argavand iyo. Tayrov. Casaankan 'Armenia', iyo sidoo kale xulashada macaamiisha, xulasho ballaaran oo madadaalo ah ayaa lagu bixiyaa hoolalka ciyaaraha badan, meelaha nasashada, baarka. Iyo dhawaan, dhismahan madadaalada ah, makhaayad cusub ayaa bilaabatay inay shaqeyso, taas oo aad ku dhadhamin karto suxuunta cunnada Armenia, Iran iyo Ruushka.
Wax walba way fiicnaan lahaayeen, laakiin tan xigta ee 2013, casino Armenia waxay go'aansatay in loo wareejiyo aagagga khamaarka gaarka ah ee horeyba loogu qeexay sharciga. Iyo bilawga sanadka cusub, khamaarista ayaa suurtogal ka noqon doonta oo keliya xuduudaha maamulka ee bulshooyinka Jermuk, Tsakhkadzor iyo Sevan.
Xaaladaha waajibka ah ee goobta khamaarka waxay ka fogaan doontaa isbitaalada, hay'adaha dowladda, hay'adaha waxbarashada iyo dhismooyinka taariikhiga ah iyo taariikhi ah masaafo dhan 500 mitir iyo ka badan, iyo sidoo kale cabirka lagu heshiiyay ee aagagga goobaha khamaarka: a casino, waa inay ahaataa laga bilaabo 250 mitir laba jibbaaran, iyo ciyaaro leh guul - aan ka yarayn 100 mitir laba jibbaaran. Abaabulaha isbeddelka goobta casino waa Wasaaradda Maaliyadda ee Armenia.
0.1 Liiska ugu sareeya ee 10 Armenian Online Casino
2.1 Khamaarista Ermeniya
3 Armenia Online Casinos iyo Khamriga
3.0.1 Shuruucda Armenia ee khamaarka - sooyaal taariikheed
3.1 Sida loo bilaabo cayaaraha ciyaaraha online-ka ah ee Armenia?
3.1.1 Goobta Ereyga iyo taariikhda gaaban taariikhda
3.1.2 Armenia ee khariidada Aasiya
3.1.3 Aragtida Yerevan
3.1.4 Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Armenia iyo Ermeniya
4 Casino of Armenia, waa shirkadaha ugu khamaarka ee ugu fiican ee Armenia
4.0.1 Casinos kale ee Armenia
ciyaarta riixitaanka ciyaarta